कमल थापाले नै बिराए बाटो , पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पर्यो यस्तो आपत ! – GALAXY
कमल थापाले नै बिराए बाटो , पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पर्यो यस्तो आपत !
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपाका नेता कमल थापालाई मात्र पत्याउँदा उनको अहिले बिजोग भएको छ । पुरानो सम्बन्ध भएकाले ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हितमा थापाबाहेक अरु लाग्लान् भन्ने सोचेका पनि छैनन् ।
ज्ञानेन्द्र र थापाको बीचमा कुनै दिन सम्बन्ध बिग्रिएको भनिए पनि स्रोतले उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्धमा त्यस्तो खटपट नआएको जनाएको छ ।
ज्ञानेन्द्रले २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्ना केही मान्छेलाई सांसद समानुपातिक बनाइदिनु भनेर आग्रह गरे पनि थापाले मानेका थिएनन् । ज्ञानेन्द्रले निर्वाचनका लागि थापालाई धेरै ठूलो रकम दिइएको पनि जनाइएको छ ।
राप्रपाले २०७० सालमा २४ जना समानुपातिक सांसद पाएको थियो । हिजोको दिनमा थापाले उठाउँदै आएको एजेण्डा सही भएकाले उनलाई पत्याएका थिए भने अहिले आएर थापाले एजेण्डा देखाएर राजनीतिक व्यापार गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
ज्ञानेन्द्रले थापाप्रति नै बढी आशा गरेका छन् । थापा २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मकवानपुर–१ बाट नेकपाका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद दाहालसँग पराजित भएका थिए । मकवानपुर थापाको गृहजिल्ला पनि हो ।
संविधानसभा २०७० बाट २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्दा राजसंस्थालाई कुनै ठाउँ दिएको थिएन तर पनि उपप्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएपछि थापाले उत्कृष्ट संविधान भन्दै हिँडे ।
थापाको पार्टी तत्कालीन राप्रपा नेपालले उठाएको विषय संविधानमा समेटिएको थिएन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लागेर राजा नै चाहिन्छ भनेर धेरै व्यक्ति वा समूहले अभियान चलाए पनि ती कसैलाई ज्ञानेन्द्रले पत्याएका छैनन् । ‘
ज्ञानेन्द्रले कमल थापालाई छोड्न पनि सक्दैनन् र थापाले उनको माग पूरा गर्न पनि सक्दैनन्’ राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका एकजनाले भने ‘थापाले सधैं म लागिरहेको छु भनेर पूर्वराजालाई मख्ख पारेका छन् त्यसैले पनि ज्ञानेन्द्रले अरुलाई पत्याउँदै पत्याउँदैनन् ।’ अहिले राप्रपामा तीनजना अध्यक्ष छन् ।
थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी अध्यक्ष भए पनि एक अर्काबीच अबको राजनीतिक दिशा कस्तो बनाउने र के एजेण्डा उठाउने भन्नेमा एकमत छैन । ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लाग्ने धेरै भए पनि ती सबैबीच एकता पनि छैन । ज्ञानेन्द्रले जनताले चाहेमा आफू फेरि पनि राजा भएर आउने जनाइसकेका छन् ।